डेंगुको उच्च जोखिममा काठमाण्डौं, यी हुन् यो रोगबाट जोगिने उपाय - USNEPALNEWS.COM
लामखुट्ट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गी रोग काठमाण्डू उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखा परेको छ। डेङ्गी भाइरसका कारण हुने उक्त रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिन सक्ने हुँदा तत्काल सतर्कता अपनाइनुपर्ने धारणा जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले राखेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि डेङ्गीलाई जनस्वास्थ्यको एउटा प्रमुख चुनौती मानेको छ। संसारभरि यसको सङ्क्रमण ३० गुणाले बढिरहेको सो सङ्गठनले जनाएको छ।
काठमाण्डू उपत्यका तथा अन्य स्थानमा डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेका दुवै प्रजाति भेटिएको डेङ्गीबारे अनुसन्धान गरेकी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय सूक्ष्मजीवविज्ञान विभागकी उपप्राध्यापक रेश्मा तुलाधर बताउँछिन्।
सुनसरी जिल्लामा एकै गाउँमा यो वर्ष मात्रै तीन हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई डेङ्गीको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
र्खरै दक्षिणपूर्वी एशियासम्बन्धी मामिला हेर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा टोलीले काठमाण्डूका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको फुल र लार्भा प्रशस्त भेटिएको महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिए।
डेङ्गी रोग फैलाउने लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्ने हुँदा मनसुन र उक्त अवधि सकिएको एक महिनासम्म उच्च जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
डेङ्गीको लक्षण कस्तो हुन्छ?
के छोरी इभान्कालाई राष्ट्रपतिका बनाउने मार्ग बनाइदिदैछन् डोनाल्ड ट्रम्प ?
आइसिसीको कारबाहिमा भारत , पाकिस्तानलाई फाइदा